Dowladda Kenya oo mar kale u digtay xubanaha barlamaanka dowladda FKMG oo shir ku qabtay Nairobi
Bluugleey Aril 24, 2005
Dowladda FKMG ee Soomaaliyeed ee tan iyo markii la dhisay ku sugan dalka Kenya ayay Xukuumadda Kenya digniin markale siisay xubnaha Baarlamaanka Soomaaliyeed ee ku shirayay hoteel ku yaal magaalada Nairobi. Dowladda Kenya waxay u sheegtey in xildhibaanada Soomaaliyeed ee shirka ku sugan eysan ku xadgudbin axdiga u yaal dalka Kenya. Waxay kaloo u sheegtay xubnihaas inay ilaaliyaan midnimada qaranka Soomaaliyeed.
Taasi waxay ka danbeysay markii xubanaha dowladda FKMG ee yeesheen kulan ka dhan ah gudoomiyaha barlamaanka iyo xubnaha ku sugan magaalada Muqdisho. In dhaweydba waxay xildhibaanada dowladda FKMG ku kala aragti duwanayaayeen markii khilaaf weyn uu soo kala dhex galay xubnaha ugu sareeya dowldaa FKMG.
Xukuumada Kenya oo ku guulaysatay in ay xirto shirkii looga soo horjeeday Guddoomiyaha barlamaanka ee dowladda FKMG ee dhawaantaan lagu qabtay hoteel ku yaal magaalada Nairobi.
Danjiraha dowladda Kenya u qaabilsan arrimaha dalka soomaaliya ambadidor Maxamed Cabdi Afay ayaa sheegay inay iyagu joojiyeen shir Jimcihii yeelan lahaayeen qaar ka mid ah xubnaha Baarlamaanka, wuxuuna sheegay Mr Maxamed Afay in taasi Qatar ku tahay Qaranimada dalka Kenya.
Wwaxaa haboon in xildhibaanada dowladda FKMG ay ka waantowbaan wax allaale wixii khilaaf ah ee burburinayo dowladda lagu soo unkay dalka Kenya. taasoo laga filayo inay laga filayo inay beddesho nidaamkii dowladnimada ee burburay mudda laga joogo 15 sanadood.